‘हामीलाई त ग्राण्डीले नराम्ररी ठग्यो, अब कोही नठगियून्’ – ईमेची डटकम
सन्तान जन्माउने योजनामा रहेका सञ्जीव न्यौपाने र एकता घिमिरेलाई यतिबेला जीवनमै सबैभन्दा ठूलो चुनौती आइलागेको छ। निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल धापासीको लापरबाहीले आफूहरूमा कल्पनै गर्न नसकिने पीडा आइलागेको उहाँहरूको भनाइ छ। नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
आफ्नो पीडा सम्झँदै न्यौपाने भन्नुहुन्छ– ‘त्यति नै बेला मेरो बुबाको स्वर्गारोहण भएकाले जीवनमा एकैपटक अत्यन्तै कठिनको अर्को घडी थपियो। त्यसलाई सामना गरेर मनलाई बाँध्दै डाक्टरले जे जे भन्छन् त्यही मान्यौं।’ सञ्जीवका अनुसार डाक्टरले त्यति नै बेला बच्चालाई निमोनिया भएकाले मेकानिकल भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने बताएकाले एनआईसीयूमा नै भेन्टिलेटरमा १४ दिनसम्म राखियो। बच्चालाई एनआईसीयूकै ब्याक्टेरियाका कारण निमोनिया भएको रहेछ। डाक्टरले बच्चामा सुधार आएको भनेर २१ दिनमा डिस्चार्ज ग¥यो। तर २५औं दिनमा ज्वरो आएकाले बच्चालाई पुनः भर्ना गरियो। कस्तो विडम्बना पीडामाथि पीडा, त्यही ब्याक्टेरियाकै कारण दिमागमा पानी जम्ने समस्या (हाइड्रोसिफालस) भएछ। त्यसैले बच्चाको दिमाग नै नष्ट बनाएछ।
सञ्जीवले थप्नुभयो– ‘चिकित्सक र नर्सहरुले बच्चामाथि मानवियतासम्म देखाएनन्, थप जटिलता निम्त्याए। उपचार लाग्दैन, दिमाग नै नष्ट भएको जानकारी गराएको भए अस्पतालको के बिग्रिन्थ्यो ? अस्पतालको लापरवाहीका कारण हामी हरेक पल मरेर आसाको त्यान्द्रो हेरेर बाँचेका छौ। श्रीमतीले बच्चाको भविष्यका लागि बैँकको जागिर छोडिन्। मैले पनि आफ्नो काम छोडेर भएभरको सम्पत्ति उपचारका लागि खर्चिएर बसेँ। आखिर बच्चामाथि अस्पतालले खेलबाड गरिदिँदा आज त्यो अबोध बालक मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्दै छ।’
सञ्जीवले भन्नुभयो– ‘शुरुमा अस्पतालका निर्देशक डा. चक्रराज पाण्डेले रातको १० बजे बेडमै आएर एकदम ब्लण्डर नै भयो भन्नुभयो। मेरो श्रीमतीलाई मेरो छोरीजस्तै रहिछौ, बच्चा मेरो नातीजस्तै हो म जसरी पनि बचाउँछु भन्नुभयो। त्यसपछि उहाँले भेट नै दिनुभएन। कानूनी बाटो खोज भन्नुभयो। अस्पतालले धोका दिएकै हो। विदेशमा भए यत्रो ठूलो मिस्टेक गर्ने डाक्टरको लाइसेन्स नै खारेज गरिन्थ्यो। नेपालका निजी अस्पतालले त उल्टै इनाम दिएर राख्दारहेछन्। ग्रान्डीले धोका दिएको हो। १३ महिनाको बच्चा खाने खेल्ने बेलामा सेन्स हराइसक्यो।
शून्य आशामा मन बाधेर हेरिरहेका छौँ। हामीलाई सोझो देखेर डा. पाण्डेले बच्चालाई रोग लाग्यो, निको भएन अब २ घण्टा मेडिटेसन गर्नुस् र चित्त बुझाउनुस् भन्नुभयो। अस्पतालको समस्या थाहा पाएर कडा कुरा राख्न थालेपछि उल्टै पीडितलाई धम्क्याउँदै भन्न थाल्यो अस्पताल प्रशनसनले–चित्त नबुझे मेडिकल काउन्सिल, अदालत जानूस्। सञ्जीवले दुःखका ती दिन सम्झदैं भन्नुभयो– ‘अहिले मैले ग्रान्डी बाहिरका डाक्टरलाई रिपोर्ट देखाएर बच्चाको दिमाग नै बनेको छैन भन्ने पत्ता लगाएँ।
यसबारे कुरा गर्दा ग्रान्डीमा पछिल्लो समय बच्चाको उपचारमा संलग्न डा.अमित थापा भन्नुहुन्छ– ‘अहिले बच्चा अस्पतालको सम्पर्कमा ल्याइएको छैन। मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी परेकाले छानविनपछि आउने रिपोर्टलाई लिएर मात्र सार्वजनिक गर्ने अस्पतालको योजना छ।’ बच्चाको अवस्थाबारे उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘दिमागमा पल्स जमेर बच्चामा यस्तो समस्या आएको हो।’
मेनेन्जाइटिस भएका बिरामीमा यस्तो हुन्छ। संजीव न्यौपानेको वच्चामा संक्रमणका कारण मेनेन्जाइटिस भएर टाउकोमा पिप जमिसकेको थियो। हामीले बच्चा पछि अपांग पनि हुन सक्छ भन्ने परामर्श दिएर अभिभावककै स्वीकृतिमा पटक–पटक शल्यक्रिया गरेका हौ।’ यसैबीच पीडित सञ्जीव न्यौपानेले आफ्नो बच्चाको इमरर्जेन्सी उपचार गर्न माग गर्दै काठमाडौँको नेपाल मेडिकल काउन्सिलसमक्ष उजुरी–निवेदन पेश गर्नुभएको छ।
यसबारे नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. ढुण्डीराज पौडेलको नेतृत्वमा कमिटी बनेर छानविन सुरु भएको उक्त काउन्सिलका अर्का सदस्य डा. प्रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिनुभयो।